Yintoni iAdobe Edge Animate CC?
Jonga i-Adobe Creative Cloud kunye nazo zonke izixhobo, iinkonzo, iiapps, kunye nezihloko zesoftware ezikhoyo; Oku kubandakanya iAdobe Edge Animate CC. I-Adobe ilamkele ngokupheleleyo ilifu; ngoku unokufumana uhlaziyo lwamva nje kunye neempawu ngaphandle kokuba ulinde uguqulelo olupheleleyo olulandelayo. Ukubhaliselwa kwilifu lokuDala kuthetha ukufikelela kuzo zonke izinto eziqhubekayo.
Yintoni ebhetele nangakumbi kukuba i-Edge Animate iyahambelana ngokupheleleyo nezihloko ezininzi kwilifu lokuDala- kunye nezinye izinto ezongezwa rhoqo.
kangaphi ukuthatha i-alka seltzer
I-Edge Animate isebenzisa i-HTML5, ethi (nangoku) ayisixhasi zonke izikhangeli. Ngethamsanqa, iAdobe ibonelela ngeempawu ezikunceda xa abaphulaphuli bakho bengasebenzisi izikhangeli zangoku. Inokwenzeka ukuba uya kufumana ukuba kukho inkxaso ngakumbi ye-HTML5 kwezi ntsuku kuneFlash; Ijaji isaphumile ukuba kuthetha ntoni oku ngekamva leFlash.
Izixhobo zakho zisefini
Zonke ezi zixhobo kunye neenkonzo ziyafumaneka kwiAdobe's Creative Cloud - ivenkile yokumisa enye kwisininzi sesoftware yoyilo lweAdobe (kubandakanya iPhotohop, Emva kweZiphumo, InDesign, Illustrator, Fireworks, Muse, kunye neDreamweaver). Uninzi lwezixhobo uninzi lwezi mveliso zesoftware ziyahambelana ne-Edge Animate.
Ungaqala ngeLifu lokuDala ngobulungu basimahla beentsuku ezingama-30 ezibandakanya i-2GB yokugcina ilifu kunye nokufikelela okulinganiselweyo kwiinkonzo. Unokufumana ngakumbi malunga Ilifu lokuyila kwi-intanethi.
Ukudala umxholo wewebhu ophilayo
I-Adobe ibonelela ngeyona nto iphambili kuwo omabini la mazwe ukulungiselela zonke iintlobo zoopopayi:
Ukuba usebenza ngezandi ze-jQuery ezoyikisayo, nokuba olo luhlobo oluhle lokoyikisa, akufuneki. I-Edge Animate iyenza yonke ikhowudi yakho. Konke okufuneka ukwenze kukudibanisa izinto zoyilo loyilo lwakho.
Kwelinye icala, ukuba uyazi ikhowudi nge-jQuery kwaye uyathanda ukuntywila ungene kwizibiyeli, emva koko i-Edge Animate ibonelela ngepaneli yekhowudi esebenzayo kakhulu onokusebenza kuyo.
Ukusebenzisana nezinye izixhobo zokupapasha
Ngelixa i-Edge Animate sisixhobo esoyikekayo sokwenza umxholo okwi-intanethi, ayisishicileli oopopayi bakho kwi-Intanethi. Ngethamsanqa, iEdge Animate iyahambelana nezixhobo ezininzi zokupapasha, usetyenziso kunye namaqonga. Nanku ukujonga ngokukhawuleza kwisixhobo ngasinye kunye nokusetyenziswa.
Ukuba ubusele ungazi, iBooks yenye yezonaapps zithandwayo nezona zikhutshelweyo kwizixhobo zeApple, kubandakanya iPhones kunye neePads.
Ngokusebenzisa i-Edge Animate ukwenza izingoma zakho, unokuziva uqinisekile ukuba abaphulaphuli bakho bazakubona oopopayi bakho bedlala ngokungenasiphako kwezinye zeefowuni ezaziwa kakhulu kunye neetafile ezijikeleze indawo. Ngcono nangakumbi, ungathumela ngaphandle ukwakheka kwe-Edge Animate kwiifom ezifanelekileyo ukusebenziseka ne-Apple iBook Author.
I-InDesign isoftware epapasha isoftware nayo eyenziwe yiAdobe. Ikuvumela ukuba wenze amaphepha okuprinta, iipilisi, kunye namanye amaqonga kunye nezixhobo. I-InDesign ikwayinxalenye yeAdobe's Creative Cloud kwaye isebenza kakuhle ngeEdge Animate. Ukuthumela ngaphandle iifayile kwi-Edge Animate ngumcimbi wokucofa izinto ezimbalwa zemenyu kwaye ke ngumcimbi wokubeka iifayile kwi-InDesign.
I-30 milligram morphine pilisi
Iziphumo ze-InDesign zikhupha amaxwebhu ePUB asebenza kwi-Apple iPad. Inkqubo ye-iBook ye-iPad isebenzisa ifomathi yePUB. Ngezi zixhobo, unikwa enye indlela yokubandakanya ukwenziwa kopopayi kwiiBooks.
indlela yokusebenzisa ithemometha yedijithali
I-Adobe Dreamweaver incede abaphuhlisi bewebhu abasakhasayo benza iiwebhusayithi ukusukela ngo-2005, kulapho iAdobe yafumana iDreamweaver kwiMacromedia. Usebenzisa i-Dreamweaver, umyili wewebhu unokubetha iiwebhsayithi ze-HTML kunye nee -apps zeselfowuni ngokuhambelana kweqonga, inqwaba yeempawu, kunye nokujonga kwangaphambili kwescreen. Ngoku, ngokukhutshwa kwe-Edge Animate 1.0, iAdobe ihlaziye iDreamweaver ukubandakanya inkxaso kwiiprojekthi zakho zoopopayi: Ungaqhubeka nokwakha iiwebhusayithi kwiDreamweaver kwaye Ngenisa iiprojekthi zakho kwi-Edge Animate.
Imisebenzi yomlilo yeAdobe
I-Adobe Fireworks yenye yemveliso yesoftware yeMacromedia onokuyisebenzisa ukwenza i-bitmap kunye nemizobo yevector. Abaqulunqi bewebhu bayayisebenzisa ngokudibanisa neDreamweaver, kwaye ngoku iEdge Animate, ukwenza indawo yokuhlangana, uyilo lwescreen, kunye nomxholo wokudibana kweetafile kunye neefowuni.
I-Adobe Muse sesinye isixhobo sokwakha iwebhusayithi, esijolise ngqo kugcisa loyilo olunobuchule obuncinci okanye obungenabuchule bokwenza iikhowudi. UMuse intsha kraca; imbonakalo yakhutshwa ngo-2012.
Ukuba uyile uyilo olonwabisayo ngokwenza uyilo lokuprinta, emva koko ukusebenza noMuse kufuneka kuza ngokwendalo. Kwaye, ukuba ufuna ukuba uyilo lwakho lubonise ukwakheka okwenziwe kwi-Edge Animate, ezo projekthi kulula ukuzongeza kwindawo yakho ye-Muse.
I-Adobe Shadow yabizwa ngokuba yi-Inspect ngasekupheleni kuka-2012.
Okwangoku, iFlash ayizukusebenza kwiintlobo ezininzi zezixhobo- kodwa iEdge Animate iya kuthi - kwaye uya kufuna ukujonga kuqala umsebenzi wakho kubungakanani obahlukeneyo bescreen njengoko unakho. Kulapho kuHlola khona. Esi sixhobo sikuvumela ukuba ujonge uhlaziyo olwenzayo kupopayi lwakho kwizixhobo ezahlukeneyo kwangoko.
ipilisi emhlophe okanye i-atv 20
ungaxuba i-aleve kunye ne-tylenol
Ixabiso lehydroquinone 4 cream
Uyila njani ikhekhe